Apple waxay dib u xaqiijineysaa xubinnimadeeda Isbahaysiga Ilaalinta Biyaha | Waxaan ka socdaa mac
Markale Apple waxay bixisaa warar aan toos ula xiriirin tiknoolajiyadda. Markan waxaan ku laabaneynaa wax ka qabashada arrinta ku saabsan deegaanka ee shirkadda dhexdeeda. Apple waxay dooneysaa inay noqoto shirkadii ugu horeysay ee aan soo deyn wax kaarboon ah sanadka 2030 taasna waa inay xushmeysaa isticmaalka biyaha macaan. Taasi waa sababta ay ugu hoggaansamida Isbahaysiga Ilaalinta Biyaha (isbahaysiga Maamulka Biyaha).
Iskaashiga ka dhexeeya Apple iyo Isbahaysiga Ilaalinta Biyaha wuxuu ku saleysan yahay Apple "Mashruuca Biyaha Nadiifka ah," kaasoo qorsheynayay inuu kaydiyo wadar ahaan 156,3 milyan mitir kuyuub oo kheyraadka biyaha saafiga ah sanadka 2020, waana qeyb ka mid ah himilada Apple ee ah in la gaaro 100% dhexdhexaad kaarboon markasta.
Apple waxay rabtaa inay shirkad noqoto Ku ixtiraam deegaanka, kaliya maahan xayeysiin laakiin xaqiiqooyin. Kaliya maahan kaarboon dhexdhexaad ah hadda, waxay rabtaa inay gebi ahaanba tirtiraan 2030. Sidoo kale wuxuu leeyahay isbahaysiyo lala yeesho ururro kale oo caawiya yoolalkaas.
Isbahaysiga Ilaalinta Biyaha waxaa loo abuuray fikrad ah in la dhiso a amniga biyaha taas oo u suurta gelinaysa dadka, dhaqamada, ganacsiyada iyo dabeecadda inay kobcaan, hadda iyo mustaqbalka. Isbahaysiga waxaa sameeyay shirkado, NGO-yo iyo qaybaha bulshada, si loo gaaro waaritaanka ilaha biyaha maxalliga ah iyadoo la qaadanayo lana dhiirrigelinayo qaab-dhismeedka guud ee isticmaalka joogtada ah ee biyaha.
Taasi waa halka ay Apple ka timaaddo, iyada oo ka mid ah shirkadahaas oo ka qayb qaadanaya taas. Shirkadda Californian iyo isbahaysigu waxay sii wadi doonaan maalgashiga warshadaha Shiinaha iyo adduunka oo dhan. Sanadkii la soo dhaafay, tirada wada-hawlgalayaasha silsiladda sahayda Apple ee helay shahaadooyinka Alliance for Water Stewardship wuxuu ka kordhay 5 ilaa 13.
Hay'addu waxay ku caddeysaa silsiladaha Apple ee sahayda iyada oo loo marayo qiimeyn dhameystiran oo uu sameeyay hanti dhowre madax banaan si loo xaqiijiyo inay la kulmeen heerarka xulafada ee maareynta biyaha. Xu Shenzhen, Agaasimaha Mashruuca Aasiya-Baasifiga, Isbahaysiga Maareynta Biyaha:
Waxaan ku faraxsanahay inaan aragno shirkado aad iyo aad u tiro badan oo ku jira silsiladda saadka ee Apple oo ka qayb qaadanaya barnaamijkayaga shahaadaynta, taas oo muujineysa saameynta iyo xoogga iskaashiga aan la leenahay Apple si kor loogu qaado maareynta biyaha heer caalami ah. Maareynta biyaha dhabta ah ayaa u baahan iskaashi iyo hogaamin. Apple wuxuu sii wadaa inuu sare u qaado baararka naftiisa iyo shirkadaha ku jira silsiladda wax soo saarka, isagoo tusaale u noqonaya dhammaan warshadaha.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay mar kale xaqiijineysaa inay u hoggaansameyso Isbahaysiga Iskaashatada Biyaha